Obama oo dhaliilay Sucuudiga iyo UK - BBC Somali
Obama oo dhaliilay Sucuudiga iyo UK
11 Maarso 2016
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama ayaa ku tilmaamay qaar ka mid ah xulufada waddankiisa ee Gacanka Beershiya iyo Yurub, in ay ka macaashayaan dadaalo aanay wax lug ah ku lahayn, kuwaasi oo uu sheegay in ay doonayaan in ay Mareykanka ay ku tuuraan colaad aanay dan ugu jirin.
Warbixin lagu daabacay wargeys ayuu Obama waxa uu ku dhaleeceeyay Britain iyo Faransiiska in ay u ogolaadeen Liibiya in ay noqoto meel fowda ah kaddib faragelintii milateri ee dalkaa lagu sameeyay, isagoo tilmaamay in Ra'iisul Wasaaraha Britain, David Cameron ay arrimuhu ka faafeen.
Sidoo kale waxa uu ugu baaqay Sucuudiga iyo Iiraan in farqiga u dhaxeeya ay ka wada hadlaan.
Haddaba hadalka Obama maxaa loo fasiran karaa? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa weriyaha BBC-da Cabdifitaah Cagayare waxa uu weeydiiyay Dr Ibrahim Faarax Bursaliid.